कुन नैतिकताले अब जेलमा राख्ने सरकार माननीय रेशम चौधरी ज्यूलाई ? - MONGOL KHABAR
कुन नैतिकताले अब जेलमा राख्ने सरकार माननीय रेशम चौधरी ज्यूलाई ?
काठमाडौ । चिट पसिना आइरहेको थियो वीर हस्पिटलको बेड्मा हामीले रेसम सर भनी बोलायौ र भन्यौ तपाईलाई भेट्न आएका हौ । जुरुक्क उठेर भन्नू भयो,'झन्डैै मेरो त मुटु नै प्वाल पारेर मार्न खोजेको थियो तर कसो कसो मार्न सकेन ।' यथार्थ बुझ्न खोज्दा उहाँको परिवार पनि थिए । बुढोलाई सिद्द्याउन होस गुमेको बखत जटिल अप्रेसन गर्न खोजेको रहेछ ।
उता प्रेसर सुगरले पीडित मान्छेलाई अप्रेसन नै गरेपछी अवस्था कस्तो होला ? हामिले उहाँलाई भन्यौ,'तपाईलाई राज्यले सिध्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।' रेसम सरले भन्नू भयो, "तपाईहरुको सान्त्वना अनि पहिचानप्रतिको विश्वास दर्साउनु भएकोमा धन्यवाद !"
निकै प्रतिकुल अवस्थामा भेट भयो रेसम सर संग त्यो पनि वीर हस्पिटलको बेड्मा । म लगायत बर्णबास दर्लामी, शक्ति चाम्लिङ र नासाहाङ थम्बु लगायत थियौ । रेशम लाल चौधरीसंग छोटो बातचितका क्रममा धेरै महत्वपूर्ण कुरा भए र ज्यादै सान्दर्भिक । सायद ती कुनैदिन लेख्ने छु ।
निर्दोष ब्यक्तिलाई अपराधको हट्कडी लगाउने पनि राज्य शक्ति हो र दोषीलाई निर्दोष बनाउने पनि । रेशम चौधरी दोषी हुन होइनन दोषी सावित गर्नेले जानोस । तर राज्यको बिभेदकारी कदमको भने जड उखेल्नु पर्दछ । उज्जैन श्रेष्ठको हत्यारा भनि बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्बोच्चले दोषी ठहर गर्दै सर्बस्व सहितको जन्मकैदको फैसला गर्यो । प्रचण्ड र ओलिको तापले न्यायको मन्दिर खरानी भयो र हत्यारा निर्दोष सावित भए ।
यता भुमिगत अवस्थामा प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित माननीय रेसम चौधरीलाई जेलमा कोचियो । एकजना जन्म कैद भुक्तान गरिरहेको ढुंगेल बाहुन र अर्को जवरजस्त दोषि साबित गरिएका चौधरीबिचको भिन्नता यहि छकी ढुंगेल उच्च श्रेणीको बाहुन र एक निच दर्जाको चौधरी जो नेपालको भुमिपुत्र(माटोको छोरा)। न्यायमुर्तिहरुले आफ्नो सत्यधर्म निभाए निभएनन तर राज्यले गर्नु पर्ने सम्मान व्यवहार भने एक ढोंगी आदर्श सावित हुन्छ ।
अचम्म त यो छकी दोषीलाई कसरी सफतग्रण गराइयो ? यदि अपराधी हुन भने रेशम चौधरी माननीय बन्न सक्दैनन उनी कानुनले अपराधी हुन । तर विचित्र यो छकी हिजोदेखि माननीय पनि बनाइ छाडे कुन नैतिकताले अब जेलमा राख्ने सरकार माननीयज्यूलाई ? नैतिकता बिहिन सरकार निर्दोष ब्यक्तिलाई जेलमा नसडाउ जेल मुक्त गर । यदि अपराधी हुन भने सभासद खारेज गर ! होइन भने नाटक बन्द गर !
बाहुनले जस्तै अपराध गरेपनी क्षमा पाउनु पर्छ भनेर कथित हिन्दुशास्त्रले निर्देश गरेको छ । यहि अनुरुप नेपालमा न्याय स्थापित भयो । चौधरी त एक उदाहरण पात्र हुन । पृथ्वी नारायण शाहले बाहुनहरुको बिश्वास नगर्नु भनेपनी बाहुनलाई कहि कतै दण्डित गर्न सकेको इतिहास भेटिदैन । मूलबासी मंगोलहरुलाई छाला काढेर नुन चुक लगाई लगाई निर्मम हत्या गरेको पाइन्छ । यस्तै राणाहरुले पनि बाहुनलाई भगवान बनायो । फलस्वरूप श्रीपनि गुरुङ सुपति गुरुङ टुक्राटुक्रा बनाई मारिए ।
सुखदेब गुरुङलाई जेलमै मारियो । नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक लामो समय जेलजीवन बिताउने र जेलभित्रै प्राण त्याग गर्ने सुखदेब गुरुङ हुन । यो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति प्राण दिने सबै दण्डित भए बाहुन कहिल्यै कतै दण्डित भएनन । २००७ सालमा राणा शासनको विरुद्ध बिद्रोह गर्ने बाहुन बाहेक सबै मारिए । बाहुनलाई मृत्युदण्ड दिनु महान अपराध हुनेभन्दै टंकप्रसाद आचार्यलाई फाँसी दिइएन । तिनै आचार्य २०१२ सालमा मन्त्री खाए । २०१४ सालमा प्रधानमन्त्री खाए ।
यहीँ नीति प्रचण्ड र ओलिले पुनः दोहोर्‍याए । परिणाम सर्वस्व जन्मकैदी बालकृष्ण ढुंगेल निर्दोष सावित गरि जेलमुक्त गरिए । रेसम चौधरीलाई जेलमा सडाइयो । यो मनुस्मृती कहिलेसम्म लागू हुन्छ ? युरेसियन सत्ता नढलेसम्म अर्थात बिदेश बाहुन क्षेत्रीले देशको बागडोर सम्हाले सम्म ।
बाहुनबादी सर्वोच्चता चोमोलुङ्मामा पुगेकैले अधिकारबादी योद्धाहरुलाई साम, दाम, दन्ड र भेद नीति अपनाइन्छ । प्रचण्ड, बाबुराम र ज्ञानेन्द्र शाह जस्ले हजारौंको ज्यान लिए । यी चाहिँ हत्यारा होइनन ? यी हत्याराहरु साढेगोरु झै हिड्न मिल्ने अरुले जेलमा कुहिनु पर्ने ?
सहरको बिचमा छाडिएको साढे गोरु जसरी हिड्ने यी प्रचण्ड, बाबुराम र ज्ञानेन्द्र शाह कुख्यात अपराधी हुन जस्ले १८ हजारको ज्यान लिए । हजारौंलाई अपांग बनाए । हजारौलाई टुहुराटुहुरी, हजारौंलाई राडी बनाए । कयौंको चेलिहरुको इज्जत लुटियो । यसको नेतृत्व यिनले गरेका थिए । आज यिनिहरु चैनले बसेका छ्न । न्यायको भिख माग्ने बेचयनले भुक्तमान खेप्नु परेको छ ।
हो, मुटु नै प्वाल पारिसक्यो माननीय के गर्नु ? तपाईको मुटुमा प्वाल पार्नु अपराध हो देशकै मुटु प्वाल पार्नु महान अपराध हो । देशको मुटुमै प्वाल छ । देश आज सिकिस्त छ । मौका छोपी भ्रष्टाचारि, बलात्कारि, सिमा अतिक्रमणकारी र साम्राज्यवादि मौलाए । धाराकिर्ना झै भए । तिनिहरु सप्पै राम्रा हुन ! हामी त छि कति नराम्रा ! नरभक्षी राम राज्यमा जिउदो लास बेकार !
हेर्नुस त ३३ किलो सुनको ढिक्को भेटिन्छ, मान्छे भेटिन्न । बलात्कार हुन्छ बलत्कारी भेटिन्न । भ्रष्टाचार हुन्छ भ्रष्टचारी पत्तो लाग्दैन । निर्दोष ब्यक्तिले बयान दिनु पर्ने अनि जेल पनि बसिदिनु पर्ने । सायद यो नेपालको नियम अरु बिश्वमा नमुना हुन सक्छ !
लेखक- जिवन मंगोल